दृष्टि - Pahilo News
भारतीय राजदूतसँग भारतकै विरोध गरेँ
एकपटकको रमाइलो घटना यहाँ सम्झन चाहन्छु । म एउटा कार्यक्रममा थिएँ । कार्यक्रम सकिएपछि बङ्गलादेशका राजदूतले भेट्ने र दुईपक्षीय हितका बारेमा कुरा गर्ने सूचना आयो । ‘ल हुन्छ, पठाइदेऊ’ भनेँ । कुरा सुरु मैले नै गरेँ– ‘भारत ठूलो देश हो, उसका हामी छिमेकी देश हौँ । साना देशहरूमाथि उसको व्यवहार ठीक भएन । सधैँ हेपाहा व्यवहार देखाउँछ । छिमे..
ट्रम्पको विजय र एक करोड आप्रवासीको भविष्य
ट्रम्पले भन्दै आएजस्तै एक करोड १० लाखको हाराहारीमा रहेका कागजपत्र विहीन आप्रवासीलाई निकाल्..
ट्रम्पको ह्वाइट हाउस प्रवेश र नेपालको सन्दर्भ
ट्रम्पको विजयसँगै अमेरिकामा गैरकानुनी रुपमा रहेका नेपालीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प..
लोकमान प्रकरणमा कोही पनि लर्बराउनु ठीक होइन
लोकमान प्रकरणमा आफूलाई सुशासनका अभियन्ता भन्नेहरु लर्बराइरहेको अवस्था छ अहिले । उनीहरुका त..
ईश्वर पोखरेलले औँल्याएका ‘एमालेका प्रमुख समस्या’
पार्टी पङ्क्तिको विचारधारात्मक स्तर माथि उठाउने काम राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन । आजको सन्द..
हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्ने सत्य हो । हामी सबै आमरुपमा गुटबन्दीमा छौँ । यसको वस्तुगत र प्रत्यक्ष प्रमाण के हो भने हामी नवौँ महाधिवेशनमा औपचारिकरुपमा दुइवटा गुटमा बाँडियौँ र निर्वाचित वा पराजित भयौँ ।
बृहत् लुम्विनी विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने छ । देशभित्र नमूनाका रुपमा सयवटा स्मार्ट भिलेज स्थापना गरिनेछ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाः समृद्धिको पहिलो खुट्किला
मधेसीले कहिल्यै आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिँदैन । न त दुर्गम, न त विभेद, न त हस्तक्षेप । तसर्थ, नेपालको संविधान मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुले राम्ररी अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
मन्त्रीज्यु, जनताले उच्च पदमा बसेका नेता तथा हाकिमहरुको पातलो दिशा लागेपनि देशको ढुकुटीबाट देशलाई व्ययभार हुनेगरी विदेशिने परम्पराको अन्त्य चाहेका छन् । तपाईंको पहिलो ध्यान त्यहाँ जान सकोस् ।
राजनीतिक अस्थिरता र पर्दाभित्रका खेलहरू
जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकेर र त्यसलाई निस्प्रभावी बनाएर मात्रै त्यो अभिष्ट पूरा हुनसक्छ । यही उद्देश्यका साथ यतिबेलाका धेरै कुराहरू सुरू गरिएका छन् । आज स्वाभिमानले उठ्न खोजेका वा उठाउन खोजिएका नेपाली शीरहरूलाई झुकाउने कोसिस गरिएको छ ।
म उपेन्द्रजी, महन्थजी र राजेन्द्रजीहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– उधारो तीन बुँदे सहमतिमै जानु थियो भने तपाईंहरुले तराई–मधेसमा कथित आन्दोलनका नाममा ५७ जना छोराछोरी किन मार्नुभयो ?
सोमबार बिहान राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको मैतीदेवीस्थित डेरामा पुग्दा उनकी पत्नी हतारमा थिइन् । मन्त्री हुनुअघि तीनवटा कोठामा बस्दै आएका चित्रबहादुर केसी मन्त्री भएपछि एक कोठा घरवेटीले नै प्रयोगमा ल्याएका रहेछन् । मन्त्री निवासबाट फर्केर तीन कोठाका सामान दुई कोठामा मिलाउनु पर्दा केसी पत्नीलाई हैरानी परेको रहेछ..
सुशासनका दृष्टिबाट ओली सरकारका नौ महिना: ठूलो भ्रष्टाचार देखिएन, कालाबजारियाहरुले समानान्तर सत्ता चलाए
यस अवधिमा सुशासनका सन्दर्भमा एउटा मात्र राम्रो पक्ष भनेको उहाँको मन्त्रिपरिषद्का कुनै सदस्य ठूलो भ्रष्ट्राचारमा मुछिएनन् र उहाँको कार्यकालमा ठूलो भ्रष्ट्राचारको काण्ड सुन्नु परेन ।
ओली सरकारको बर्हिगमन र भू–राजनीतिको कू–प्रभावमा नेपाल
जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलन जसमा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्नेदेखि नेपालमा केवल दुई तराई र पाहडी राष्ट्रियता मात्र भएको भन्ने कुरालाई उचालिरहेका छन् । अकोतर्फ, सिके रावत जस्ता व्यक्तिलाई पनि उचालिरहेका छन् ।
माननीय सदस्यज्यूहरुलाई खुल्लापत्र
संविधानसभावाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना निकै लामो समयपछि पूरा भएको छ । पहिला संविधानसभाले संविधान दिन नसकेर निरास बनेका हामी सबै नेपाली जनतालाई दोश्रोे संविधानसभाले यो निरासाबाट मुक्ति दिलाएको छ ।
युगान्तकारी परिवर्तनको श्रेय पुष्पलाललाई
“आफ्नो क्रान्तिकारी जीवनमा पुष्पलालले कहिल्यै पनि स्वार्थका काला वादलहरुको छायाँ पर्न दिनुभएन, अरु धेरै नेताहरुमा जस्तो उहाँमा घामछायाँ पाइदैन । पुष्पलाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको साझा सम्पती हो । एउटा सर्वोच्च व्यक्तित्व हो ।”– मदन भण्डारी “पुष्पलाल नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीका पिता हुन् । इमानदारीताका साथ भन्दछु, उनले गरेको दुःख र क..
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालका २१ योगदान
नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमका सन्दर्भमा कमरेड पुष्पलालले नयाँ जनवादी कार्यक्रमलाई अगाडि सार्नुभयो । यो कार्यक्रम आफैंमा एउटा सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी कार्यक्रम थियो । त्यसका कतिपय अवधारणाहरू अझै अधुरा र अपूर्ण थिए जसलाई हाम्रो पार्टीको पाचौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को रुपमा विकसित गरियो र जबज वास्तवमा नेपाल..
रोम विधान अनुमोदन: माओवादी किन तर्सिन्छ ?
युद्धअपराधमा संलग्नहरुलाई राष्ट्रिय कानुन नै फेरेर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च चलिरहेका बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको यो रोम विधानको आवश्यकता झन सान्दर्भिक भएको छ ।
के प्रचण्डलाई यो गठबन्धनप्रति पश्चाताप भएको हो ?
अधैर्य नहुँदा दाहाल यही गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । बहुमत नभएको एमालेले पूरै समय आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनिरहनुपर्छ भन्ने दावी गर्न सक्दैन र मिल्दैन । समयको उचित बाँडफाँट गरेर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प खुल्ला नै छ ।
अनि कसरी गरिबी निवारण हुन्छ ?
कृषि, पर्यटन र ऊर्जा जस्ता अहिलेका राज्यका सरकारका समाजका प्राथमिक विषयहरुलाई सहकारीमार्फत जाने बाटो खोलिदिनुपर्छ । सहकारी ऐनलेको प्रस्तुत भएको ऐनले पनि सहकारी मार्फत कम्पनीहरुसँग साझेदारी गर्न नसक्ने गरी प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने सुनिन्छ । त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्दछ र सहकारी ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो बदलिँदो परिस्थिति अनुसार लिएर आउनुपर..
प्रजातान्त्रिक समाजवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद एउटै हो ?
अझ कतिपयले त प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्टबीचको फरक नै हराउने गरी व्याख्या गर्ने गरेका छन्, यो सही होइन । अहिले कतिपय एमालेका साथीहरूको व्याख्या सुन्दा लाग्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवाद र साम्यवाद एउटै हो । अहिले मदनले सुरु गरेको बहसलाई समेत त्यतातिर मोडेर उनीहरूले गन्जागोल गरेका छन् ।
मदनसँगका कहिल्यै नमेटिने ती मीठा सम्झना
'यो मेरो भावना अभ्यासको विरुद्ध कुनै ढंगले षड्यन्त्र, तिकडमबाजी र अनुचित खालका तौरतरिका प्रयोग गरेर कोही आउँछन् भने त्यस्तो बेला जस्ताको तस्तै टक्कर गर्नको निमित्त एकजना पार्टी सदस्यको हैसियतमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा कुनै आश्चर्यको विषय हुने छैन ।’
जबजसँग मेरो यात्रा
एक हिसाबले भन्ने हो भने म आफ्नो जिन्दगीमा दुईपटक थिग्रिएको छु । पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पर्कमा आएपछि, दोस्रो ‘आजको माक्र्सवाद र नेपाली क्रान्ति’ लेखेपछि । १ म सानोमा साह्रै चकचके थिएँ । छ कक्षाको ‘महेन्द्रमाला’ मा थोमस एल्भा एडिसनको जीवनी पढेपछि म अझ अधैर्य भएँ । एडिसनले १,०९८ वटा आविस्कार गरेका थिए भन्ने कुराले मेरो [&h..
सन्दर्भ ६५ औं जन्मदिनः मदन भण्डारीसँगका पाँच क्षण
‘तपाईं पार्टीको महासचिव । तपाईंको सहयोगी कम्तीमा पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुपर्छ । मलाई कर नगर्नूस् । कुनै पदमा नबसी पनि म तपाईंलाई सघाउँला ।’
एमालेको अञ्चल कमिटी विघटनले प्रवासमा पारेको समस्या
लामो समयदेखि अञ्चल कमिटीको हैसियतमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको प्रवासी नेपाली संघले अब कस्तो जिम्मेवारी पाउला ? त्यो जिज्ञासाको विषय बनेको छ । पार्टीले भूगोलका रुपमा नभएर प्रवासी नेपाली संघकै रुपमा स्थापित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विगतका राजनीतिक आन्दोलनहरुमा सक्रियताका साथ सहभागिता जनाएका हजारौँ प्रवासी नेपालीहरु पार्टीको ..
संविधान कार्यान्वयनका चुनौती र समस्या समाधानका उपायहरु
हामी कहीं न कहीं अलमलिएका छौं भन्ने मलाई लाग्दछ । हाम्रो तीनतिर भारत छ भने उत्तरतर्फ चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बत । यो भौगोलिक अवस्थिति र परिस्थति हाम्रो यथार्थ हो ।
संसद् अनिर्णयको बन्धक, कार्यक्षमतामाथि प्रश्न !
२०७३ असोज ३ गते संविधान जारी गरेसँगै संविधानसभाको सम्पूर्ण काम नियमित संसद्मा रुपान्तरण भएको छ । संविधानसभाका रुपमा जनताबाट निर्वाचित भएर संविधान बनाउने काम सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका मुलुकको विधायकीय क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, संसद् आफैँले आफूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा उसको भूमिका प्रभावक..
प्रधानमन्त्री विशेष कृषि प्याकेज यसरी हुन्छ सफल
हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान मुलुकका रुपमा परिचित छ । यहाँका बहुसंख्यक मानिस कृषिमा निर्भर छन् । कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको क्षेत्रमा सरकारले विशेष कदम चाल्ने हो भने हाम्रो देश नेपाललाई आर्थिक संवृद्धिको बाटोमा अघि बढाउँन सहज हुनेछ । विज्ञहरुले पनि यहि तर्क गर्ने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन सरकारले ‘प्रधानमन्त्री विशेष कृषि प्याकेज..